Artezzy ပွောပွတဲ့ Dota2 သငျခနျးစာတခြို့ – Gaming Noodle
Artezzy ပွောပွတဲ့ Dota2 သငျခနျးစာတခြို့
Google မှာ Dota2Guide (သို့မဟုတျ) Dota2Tips and Tricks လို့ရိုကျလိုကျရငျ ဗီဒီယိုတှေ၊ ဆောငျးပါးတှေ အမြားကွီးကိုရှာတှမှေ့ာဖွဈပမေယျ့ အမြားစုကတော့ Gameleap ရဲ့ အဓိက Content Creator “Speed” လို Coach တှနေဲ့ BSJ လို semi-pro တှရေဲ့ Content တှသောဖွဈပွီး လကျရှိပွိုငျပှဲကွီးတှမှောကစားနတေဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားသမားတှကေိုယျတိုငျမြှဝထေားတာကတော့ မရှိသလောကျနညျးပါးပါလိမျ့မယျ။
အထူးသဖွငျ့ OG, Secret, EG လိုအသငျးကွီးက ကစားသမားတှမြှေဝတေဲ့ In-game Knowledge တှကွေားရမွငျရဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောငျရှားပါဦးမယျ။ ဒါပမေယျ့ ကစားစရာပွိုငျပှဲကွီးကွီးမားမားမရှိသေးလို့ ဒီဘကျရကျပိုငျးမှာ နစေ့ဉျရကျဆကျ Stream နတေဲ့ Arteezy ကတော့ သူ့ရဲ့ In-game Knowledge တှနေဲ့ သူ့အမွငျတခြို့ကို Viewer တှနေဲ့မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ NA Rank 1, EU Rank5ရရှိထားသလို လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး Position 1 ကစားသမားတှထေဲကတဈယောကျဖွဈတဲ့ Arteezy ဘာတှမြှေဝခေဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ အောကျမှာဆကျလကျဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
(1) Melee Carry တိုငျး Battlefury ဝယျသငျ့သလား?
Viewer တဈယောကျမေးထားတဲ့ ဒီမေးခှနျးကိုတော့ Arteezy က Melee Carry ဆိုတိုငျး Battlefury ဝယျစရာမလိုဘူးလို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ Antimage, Ursa လို Hero တှအေနနေဲ့ လိုခငျြတဲ့ Item Timing ကိုအမွနျဆုံးရောကျနိုငျဖို့ Battlefury လိုပမေယျ့ လကျရှိ Meta မှာ Hot နတေဲ့ Carry Hero တှအေတှကျတော့မလိုဘူးဆိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Illusion ထုတျတဲ့ Phantom Lance, Terrorblade, Naga Siren လို Hero တှအေတှကျကတော့ ထညျ့တောငျစဉျးစားစရာမလိုတဲ့ Item တဈခုပါတဲ့။
သူ့အနနေဲ့ Terrorblade ကို Battlefury ထညျ့ကစားခဲ့ရတာဟာလညျး ပှဲခြိနျ ၂၅ မိနဈမှာ Item 4,5 ကှကျမရရငျ ပှဲနိုငျဖို့မဖွဈနိုငျလို့ ထညျ့ရတာဖွဈတယျလို့လညျး ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Faceless Void, Phantom Assassin နဲ့ Troll Warlord တို့အနနေဲ့လညျး Battlefury မလိုအပျဘူးလို့ ထပျလောငျးပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
(2) Public ပှဲတှကေိုဘယျလိုနိုငျအောငျဆော့မလဲ?
Public ပှဲတျောတျောမြားမြားဟာ Draft မှာတငျအနိုငျအရှုံးပျေါနတေတျပမေယျ့ ပှဲခြိနျ ၁၅ မိနဈ (Mid Game) ဝနျးကငျြမှာ တဈဘကျအသငျးကို လိုကျခပြွီး Late Game အတှကျ Win Condition ကောငျးအောငျလုပျနိုငျရငျတော့ နိုငျဖို့အခှငျ့အရေးမြားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
(3) Core တှေ Meteor Hammer ထညျ့တဲ့အပျေါ
နောကျပိုငျးတှလေ့ာရတဲ့ Spectre, Arc Warden တို့ Meteor Hammer ကို Item တဈခုအဖွဈရှေးခယျြလာကွတာကို Arteezy ကတော့သိပျသဘောကပြုံမရပါဘူး။ Spectre အနနေဲ့ Mana Regen, Health Regen လိုခငျြရငျ Basi(Ring of Basilius) နဲ့ Ring of Tarrasque ကိုရှေးခယျြနိုငျကွောငျး၊ Spectral Dagger လို Creep တဈအုပျလုံးကို သှေးတဈဝကျလြော့အောငျလုပျနိုငျတဲ့ Abilty ရှိတဲ့အတှကျ Flash Farm နိုငျဖို့ Meteor Hammer ကိုထပျထညျ့နစေရာလိုကွောငျးနဲ့ Arc Warden အတှကျ 2500 gold (2350) ကုနျမယျ့ Meteor Hammer အစား Maelstorm ကိုသာဝယျသငျ့ကွောငျး စသဖွငျ့သူ့အမွငျကိုမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
(4) Ranged Creep စားရဖို့ဘယျလောကျအထိစတေးသငျ့သလဲ?
Laning Stage မှာ Gold ရော Exp ရောအမြားဆုံးပေးတဲ့ Ranged Creep ကို Deny အပေးမခံရဖို့က ဘယျလောကျအရေးကွီးကွောငျး Dota2ကစားသူတိုငျးနီးပါးသိကွမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ Early Wave တှမှော တဈကောငျဆိုရငျဆိုသလောကျ Level ပွတျတဲ့အထိ Impact ကွီးမားတာကွောငျ့ နောကျပိုငျး Ranged Creep အတှကျ overcommit လုပျတဲ့သူတှမြေားလာပါတယျ။ Arteezy ကတော့ Ranged Creep စားရဖို့ Hp တဈဝကျလောကျအကုနျခံတာဟာ မလုပျသငျ့တဲ့အပွုအမူတဈခုဖွဈပွီး အဲဒီလိုအလကားစတေးခံမယျ့အစား Enemy နဲ့ Regen ခငျြး Trade သငျ့ကွောငျးပွောပွခဲ့ပါတယျ။
(5) အသုံးဝငျတဲ့ Mid Hero ဆိုတာ
Arteezy ဟာ Carry ကစားသမားဖွဈပမေယျ့လညျး ဂိမျးရဲ့ Tempo ကိုထိနျးညှိပေးရတဲ့ Mid Hero တှအေပျေါ သူ့အမွငျကိုလညျးပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။ လကျရှိ Meta မှာ Mid အတှကျဆိုရငျ 2000 Gold လောကျနဲ့ Power Spike ရတဲ့ Hero မြိုး (ဥပမာ- Batrider with Boots of Travel) နဲ့ Power Rune တဈခုလောကျနဲ့ Effective ဖွဈမယျ့ Void Spirit, Ember Spirit လို Hero မြိုးတှသောကိုငျသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Tinker လို Boots of Travel နဲ့ Blink Dagger ရဖို့ 14 မိနဈလောကျ afk farm နရေတဲ့ Hero မြိုးကိုငျထားတဲ့အသငျးနဲ့ Batrider လို Boots of Travel တဈရံလောကျနဲ့ တဈသငျးလုံးကိုဒုက်ခလိုကျပေးနိုငျမယျ့ Mid Hero ကိုငျထားတဲ့အသငျးယှဉျမယျဆိုရငျ Batrider ပါတဲ့အသငျးက Early Game မှာ Kill ရပွီး Snowball နိုငျမှာဖွဈလို့ အနိုငျရဖို့အခှငျ့အလမျးပိုသာကွောငျး ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
Artezzy ပြောပြတဲ့ Dota2 သင်ခန်းစာတချို့
Google မှာ Dota2Guide (သို့မဟုတ်) Dota2Tips and Tricks လို့ရိုက်လိုက်ရင် ဗီဒီယိုတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ အများကြီးကိုရှာတွေ့မှာဖြစ်ပေမယ့် အများစုကတော့ Gameleap ရဲ့ အဓိက Content Creator “Speed” လို Coach တွေနဲ့ BSJ လို semi-pro တွေရဲ့ Content တွေသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာကစားနေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်မျှဝေထားတာကတော့ မရှိသလောက်နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့် OG, Secret, EG လိုအသင်းကြီးက ကစားသမားတွေမျှဝေတဲ့ In-game Knowledge တွေကြားရမြင်ရဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောင်ရှားပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားစရာပြိုင်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိသေးလို့ ဒီဘက်ရက်ပိုင်းမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် Stream နေတဲ့ Arteezy ကတော့ သူ့ရဲ့ In-game Knowledge တွေနဲ့ သူ့အမြင်တချို့ကို Viewer တွေနဲ့မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ NA Rank 1, EU Rank5ရရှိထားသလို လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Position 1 ကစားသမားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arteezy ဘာတွေမျှဝေခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(1) Melee Carry တိုင်း Battlefury ဝယ်သင့်သလား?
Viewer တစ်ယောက်မေးထားတဲ့ ဒီမေးခွန်းကိုတော့ Arteezy က Melee Carry ဆိုတိုင်း Battlefury ဝယ်စရာမလိုဘူးလို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ Antimage, Ursa လို Hero တွေအနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ Item Timing ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ Battlefury လိုပေမယ့် လက်ရှိ Meta မှာ Hot နေတဲ့ Carry Hero တွေအတွက်တော့မလိုဘူးဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Illusion ထုတ်တဲ့ Phantom Lance, Terrorblade, Naga Siren လို Hero တွေအတွက်ကတော့ ထည့်တောင်စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့ Item တစ်ခုပါတဲ့။
သူ့အနေနဲ့ Terrorblade ကို Battlefury ထည့်ကစားခဲ့ရတာဟာလည်း ပွဲချိန် ၂၅ မိနစ်မှာ Item 4,5 ကွက်မရရင် ပွဲနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ ထည့်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Faceless Void, Phantom Assassin နဲ့ Troll Warlord တို့အနေနဲ့လည်း Battlefury မလိုအပ်ဘူးလို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
(2) Public ပွဲတွေကိုဘယ်လိုနိုင်အောင်ဆော့မလဲ?
Public ပွဲတော်တော်များများဟာ Draft မှာတင်အနိုင်အရှုံးပေါ်နေတတ်ပေမယ့် ပွဲချိန် ၁၅ မိနစ် (Mid Game) ဝန်းကျင်မှာ တစ်ဘက်အသင်းကို လိုက်ချပြီး Late Game အတွက် Win Condition ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(3) Core တွေ Meteor Hammer ထည့်တဲ့အပေါ်
နောက်ပိုင်းတွေ့လာရတဲ့ Spectre, Arc Warden တို့ Meteor Hammer ကို Item တစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်လာကြတာကို Arteezy ကတော့သိပ်သဘောကျပုံမရပါဘူး။ Spectre အနေနဲ့ Mana Regen, Health Regen လိုချင်ရင် Basi(Ring of Basilius) နဲ့ Ring of Tarrasque ကိုရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း၊ Spectral Dagger လို Creep တစ်အုပ်လုံးကို သွေးတစ်ဝက်လျော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ Abilty ရှိတဲ့အတွက် Flash Farm နိုင်ဖို့ Meteor Hammer ကိုထပ်ထည့်နေစရာလိုကြောင်းနဲ့ Arc Warden အတွက် 2500 gold (2350) ကုန်မယ့် Meteor Hammer အစား Maelstorm ကိုသာဝယ်သင့်ကြောင်း စသဖြင့်သူ့အမြင်ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
(4) Ranged Creep စားရဖို့ဘယ်လောက်အထိစတေးသင့်သလဲ?
Laning Stage မှာ Gold ရော Exp ရောအများဆုံးပေးတဲ့ Ranged Creep ကို Deny အပေးမခံရဖို့က ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်း Dota2ကစားသူတိုင်းနီးပါးသိကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Early Wave တွေမှာ တစ်ကောင်ဆိုရင်ဆိုသလောက် Level ပြတ်တဲ့အထိ Impact ကြီးမားတာကြောင့် နောက်ပိုင်း Ranged Creep အတွက် overcommit လုပ်တဲ့သူတွေများလာပါတယ်။ Arteezy ကတော့ Ranged Creep စားရဖို့ Hp တစ်ဝက်လောက်အကုန်ခံတာဟာ မလုပ်သင့်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုအလကားစတေးခံမယ့်အစား Enemy နဲ့ Regen ချင်း Trade သင့်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
(5) အသုံးဝင်တဲ့ Mid Hero ဆိုတာ
Arteezy ဟာ Carry ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဂိမ်းရဲ့ Tempo ကိုထိန်းညှိပေးရတဲ့ Mid Hero တွေအပေါ် သူ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိ Meta မှာ Mid အတွက်ဆိုရင် 2000 Gold လောက်နဲ့ Power Spike ရတဲ့ Hero မျိုး (ဥပမာ- Batrider with Boots of Travel) နဲ့ Power Rune တစ်ခုလောက်နဲ့ Effective ဖြစ်မယ့် Void Spirit, Ember Spirit လို Hero မျိုးတွေသာကိုင်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Tinker လို Boots of Travel နဲ့ Blink Dagger ရဖို့ 14 မိနစ်လောက် afk farm နေရတဲ့ Hero မျိုးကိုင်ထားတဲ့အသင်းနဲ့ Batrider လို Boots of Travel တစ်ရံလောက်နဲ့ တစ်သင်းလုံးကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနိုင်မယ့် Mid Hero ကိုင်ထားတဲ့အသင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် Batrider ပါတဲ့အသင်းက Early Game မှာ Kill ရပြီး Snowball နိုင်မှာဖြစ်လို့ အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပိုသာကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။